Ihe ị ga-ahụ n'isi obodo Bulgaria, Sofia | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-ahụ na Sofia
Sofia bụ isi obodo Bulgaria, emi odude ke se ẹkotde Eastern Europe. Taa ọ na-eto eto dị ka nnukwu ebe dị ọnụ ala, ebe ọ bụ na ndụ n'obodo a dị ọnụ ala karịa na isi obodo Europe ndị ọzọ, nke nwere ọtụtụ ihe metụtara obere ụgwọ na ọnọdụ obibi ndụ. Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme ka Bulgaria too n'ihi obere ụgwọ ọnwa, mana o nwekwara ọtụtụ ihe jikọrọ ya na ndị njem na-arị elu.
La Obodo Sofia na-enye otutu ebe ichota, site n’ebe ndebe ihe mgbe ochie gaa na ụka ma ọ bụ alakụba mere eme. E nwere ọtụtụ ihe ebe ị pụrụ ịnụ ụtọ a European aga na-erubeghị mmadụ. Ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịga njem na obodo European, ebe a bụ isi nke mmasị na Sofia.
1 Katidral Sophia
2 Chọọchị Sveti Georgi
3 Serdica nkwụnye ego
4 Sofia Regional History Museum
5 Katidral nke Sveta Nedelya
8 Ogige Borisova Gradina
Katidral a A na-akpọ ya Alexander Nevsky, ụlọ nsọ Ọtọdọks, nke e wuchara na 1912. Katidral a mara mma nwere ọtụtụ domes, nke bụ ihe ngosi, ụfọdụ n'ime ha nwere ezigbo ọla edo. N'ime katidral ahụ enweghị nnukwu ọkụ, ebe ọkụ na-agafe naanị obere windo dị n'okpuru okpuru domes. N'ime ị nwere ike ịhụ ọtụtụ eserese na mgbidi na n'ime ụlọ ndị ahụ.
Chọọchị Sveti Georgi
Chọọchị a nwere ike ọ gaghị adọta uche anyị mgbe anyị ruru ya, mana ọ bụrụ na anyị abanye n’ime akụkọ ihe mere eme anyị ga-amata na ọ bụ ya chọọchị kacha ochie na Bulgaria niile, nke na-enye ya nnukwu uru. Ọ malitere n’oge Alaeze Ukwu Rom. Ọnọdụ ya siri ike ntakịrị, ebe ọ bụ n'ogige nke ụlọ gọọmentị, nke ewuru gburugburu ya.
Serdica nkwụnye ego
Obodo Sofia di na obodo ochie nke oge nke Alaeze Ukwu Rom. Ugbu a ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla fọdụrụ, ma ọ ka nwere ike ịhụ ụfọdụ ihe echedoro. N’akụkụ ebe ahụ Nezavisimost dị, e nwere ụfọdụ ebe echedoro, nke nwere akụkụ nke okporo ụzọ ndị Rom ma ọ bụ ụlọ ihe nkiri Rome.
Lọ a mara mma dịkwa na gburugburu ebe mara mma, nke ubi na isi iyi gbara gburugburu ebe ikuku dị mma. N'ụzọ na-akpali mmasị, ụlọ a bụ nke baths oge ochie nke naanị ụzọ abụọ fọdụrụ. N'ime ụlọ ị ga-ahụ ọtụtụ narị ihe metụtara akụkọ ihe mere eme nke obodo Sofia. Ma kwa taa, ọ bụ ebe ọtụtụ ndị nne na nna họọrọ, ebe ha nwere ọrụ maka ụmụaka. Mụaka nwere ike ịga klaasị na usoro ọmụmụ niile ebe ndị nne na nna na-enwe ọ theụ. N'ihi ya, ọ ghọrọ ụlọ ngosi ihe nka na-arụ ọrụ nke na-agbakwunye obodo ahụ uru.
Katidral nke Sveta Nedelya
Katidral a dị na nsọtụ Nezavisimost Square ọ bụkwa Katidral Ọtọdọks nke Bulgarian. Amabeghị afọ ọ malitere iji rụọ ya bụ eziokwu arụ ndị ọzọ, ma ọ bụ n’ezie akụkụ nke Ihe Nketa nke obodo a. Ekwenyere na enwere ike wulite ya na narị afọ nke 1925. Okwesiri iburu agha agha emere na 50 iji kwusi ndu tsar, nke mere ka aghagharia ya kpamkpam na XNUMXs.
N’obodo ukwu ọ bụla enwere uzo raara nye ịzụ ahịa na oge ezumike. N'obodo Sofia, ọ bụ Bulevar Vitosha, n'okporo ámá na-agafe agafe ebe ị nwere ike ịchọta ụdị ụlọ ahịa na ụlọ nri niile. Okporo ámá a sara mbara na-ekwurịta okwu na Obí nke Omenala na Obí Ikpe Ziri Ezi. Ọ bụ ebe ntụrụndụ na ịzụ ahịa.
Central Market nke obodo na-eburu oghe kemgbe mmalite nke narị afọ nke XNUMX. Ọ bụ ụlọ obibi ọhụụ mara mma nke nwere ụlọ elekere. N'ime ya anaghị elekọta ya, mana eziokwu bụ na ọ bụ otu n'ime ebe ndị ahụ dị na obodo ị ga-eleta, iji hụ ihe gafere ebe ndị njem nleta. Na ahia a, ị nwere ike ịgagharị n'okpukpu atọ ahụ na-ekiri mkpọtụ ịzụ ahịa kwa ụbọchị ma na-anụ ụtọ ísì ụtọ na ụtọ nke ngwaahịa Bulgarian.
Ogige Borisova Gradina
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obodo niile, e nwere ogige ntụrụndụ buru ibu nke na-eme ka ezinụlọ nwee obi ụtọ kwa ụbọchị n’èzí. N'okwu nke Sofia ogige ntụrụndụ a bụ nke Borisova Gradina. Nnukwu oghere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ebe ị nwere ike iji nwayọ na-aga ije iji chọpụta ụfọdụ ebe mmasị ya, dị ka Puente de las Águilas, ụlọ mgbakọ na-emeghe n'èzí ebe a na-eme ihe omume, ebe egwuregwu maka ụmụaka na ọbụna Ọdọ Mmiri Ariana. Nke a bụ ogige akụkọ ihe mere eme nke Tsar Boris III wuru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Sofia » Ihe ị ga-ahụ na Sofia